I-Bancc™️-Boom, Bam, Bancc!
Isiqinisekisi kunye nabadali
Isicelo soQinisekiso (N/A)
I-Bancc™️ yenza iqonga lokuhamba elilandelayo Sijoyine kuhambo olulandelayo lwe-FinTech lwenkulungwane. Kubantu, ngabantu. Whitepaper Tshintshiselana & Thenga i-crypto nge-0%. I-BanccDex™️ luTshintshiselwano/iAggregator eqokelelweyo eqokelela zonke iitshintshi ezahlukeneyo kwiBinance Smart Chain (BSC), i-Ethereum (ETH) kunye nenethiwekhi yePolygon ibe sisicelo esinye. YENZA i-APP doc Fumana ukuya kuthi ga kwi-500% APY eBanccStaking™️ I-BanccStaking™ liqonga elibambekayo elibonelela ngezinto ezahlukeneyo zeBeta, iAlpha, iOmega kunye neValhalla. YENZA i-APP doc I-BanccDAO™️ ikhuthaza uluntu ukuba lwenze utshintsho kube kanye I-BanccDAO™️ siSicelo sokuVota kuLawulo oluLundisiweyo kuluntu lwe-Bancc™️ ukuze lubonelele ngezindululo kwaye lufumane umlinganiselo wokuba sifunwa kangakanani na isindululo. YENZA i-APP doc Unomdla kwintsebenziswano? Finyelela kuthi namhlanje kwaye siza kulungisa into enenzuzo kuwo omabini amaqela Qhagamshelana nathi doc
I-Bancc yinkampani yeBlockchain eqala ukwenza iqonga lezemali elilandelayo ngokuvala umsantsa phakathi kobugcisa obukhoyo kunye namathuba e-blockchain.
Thenga i-sBanc apha!
Amaziko eendaba aphezulu ayasazi
Inyathelo elinye ngexesha
Iminyaka emithathu ekwenzeni
Iimpawu zeBancc Ecosystem
Imarike yehlabathi kunye ne-cryptocurrency ilinganiselwe kwiinketho zemali ezibiza kakhulu kwaye zicotha ukuyisebenzisa. Ukushiya imarike enkulu eshiywe ingabanjwanga. Ukuba mfutshane kwezinye iindlela ezingcono, yile nto besibambekile kuyo kude kube ngoku…
Thumela imali kwihlabathi liphela ngemizuzwana eyi-1 usebenzisa iapp yethu ekulula ukuyisebenzisa
EzeMali kunye noRhwebo
Rhweba ngokulula i-cryptocurrency yakho oyithandayo kunye ne-app yethu ekulula ukuyisebenzisa
Hlawula nge-debit yakho / ngetyala ngeBancCard™️ okanye uhlawule ngokuthe ngqo nge-cryptocurrency wallet. Imali yakho, ukhetho lwakho
Cwangcisa ivenkile yakho ye-intanethi ngokucofa okumbalwa ngeBancc™️ Indawo yeMarike
IBancc™️ IiMveliso kunye neeNkonzo
I-BanccSwap™️ lutshintshiselwano olunabileyo kunye neekhontrakthi eziphicothiweyo ezihlakaniphile zokuqalisa ukwakha i-amali yezibini ezizayo zethokheni ye-Banc efana ne-BUSD, i-USDT, i-WBNB okanye ukubonelela ngemali yokuhlawula amatyala kuyo nayiphi na ithokheni ekwi-ecosystem ye-Binance Smart Chain.
I-BanccYield™️ liqonga lokufama lesivuno esinatyisiweyo ukuze ulime i-sBanc ngendlela elula nenika inkuthazo. Nika enye yezi zibini kwaye ufumane umvuzo kwi-sBanc.
I-BanccCEX™️ lutshintshiselwano olusembindini apho uya kukwazi ukurhweba ukuya kuthi ga kwi-160+ izibini kunye nenkxaso enkulu yobutyebi bezinye ii-cryptocurrencies ezifana neBitcoin, i-Ethereum, iDash njl njl. I-BanccCEX™️ yimveliso ebalulekileyo kwi-ecosystem ye-Bancc™️ kwaye ayizukubonelela kuphela Izakhono zokurhweba kodwa kunye neendlela zokuboleka / zokuboleka ukuze abasebenzisi bafumane umvuzo.
I-BanccAccount™️ / Q2
I-BanccAccount™️ yiakhawunti yakho yobuqu ukuze ube nesishwankathelo se-fiat yakho kunye ne-cryptocurrency assets. Oda iBancCard yakho ™️ kwaye uqalise ukugcina umrhumo kuzo zonke iintengiselwano xa ubeke iithokheni zakho kwi-BancChain™️.
I-BanccNFT™️ / Q3
I-BanccNFT™️ iya kuba yinxalenye ekhethekileyo kunye nelinganiselweyo ye-NFT's kubasebenzisi ukuba bafumane izandla zabo apho baya kuba neseti eyahlukileyo yeempawu zoyilo kwi-NFT nganye. Iimpawu ziya kuba phakathi kwemigca yoku-odola kwangaphambili kwamakhadi e-debit ezayo ukuba akukho ntlawulo yokurhweba.
I-BanccPay™️ / Q3
I-BanccPay™️ lisango lentlawulo yeemali ze-fiat kunye ne-cryptocurrencies. Yamkela wonke umntu kuyo yonke indawo iVisa, MasterCard, American Express njl.
I-BanccMerchant™️ / Q4
I-BanccMerchant™️ yinkqubo yeeNdawo zoThengiso esebenza ngokupheleleyo ukunika ubhetyebhetye kunye nokulula ngokulula kuye nawuphi na umrhwebi ukuba amkele kwaye aqalise ukuthengisa iimveliso/iinkonzo zakhe kwihlabathi, kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi.
Iyasebenzisana kwaye iScalable
Utshintshiselwano ngesantya sombane kunye nokuya kuthi ga kwi-10,000 yentengiselwano ngomzuzwana
Fumana i-$ BANC ngokubaleka
I-CEFI kunye ne-DEFI
Iingqekembe zakho, amathuba akho
Tshintsha ngaphezulu kwe-100+ ye-asethi enqamlezayo
Ukwenza izisombululo ezilula
Umsebenzisi Wenzelwe Nabani na
Enye yeenkolelo zethu eziphambili kukuba yonke imali ye-Crypto / uphawu kufuneka ibe luncedo. Uninzi lweeprojekthi ziyaliphosa elo candelo kodwa asikho. I-$ BANCC iya kusetyenziswa iqonga lethu ukusombulula ingxaki yehlabathi yokwenyani kwaye yiloo nto esenza sahluke.
Umsebenzisi uthenga iBancc ngokuzenzekelayo.
Abasebenzisi bathumela ezithengiweyo
$Banc kumsebenzisi ofunwayo
IFIAT OKANYE ICRIPTO
Abasebenzisi bafumana i-bancc kwaye banokutshintshiselana kuyo nayiphi na i-fiat okanye i-crypto
bakhetha ngesandla okanye ngokuzenzekelayo.
Ilula & Nentsonkothileyo
Ingcamango yokuqala yadalwa. Besifuna ukwenza imveliso eyenza ukuba iintlawulo ezinqamlezayo zikhawuleze, zilula kwaye zisezantsi kwiimalike. Uphando lugqibe ekubeni ababoneleli bangoku banikezela ngeenkonzo eziphelelwe lixesha, ezingathembekanga kunye neendleko eziphezulu kubasebenzisi. Siye safikelela kwisigqibo sokuba ukuze sibonelele ngeyona nto ingcono asikwazi ukuba bodwa kudidi oluthile loqoqosho lwentlalo. Sigqibe ekubeni sihlaziye kwaye sihlaziye into esiyibiza ngokuba “liqonga” ngoku.
$ 50K Imbewu Round Iphakanyiswe
Siye saphumelela ngomjikelo we-50K weMbewu kwaye safumana enye imali yokuqalisa uphuhliso lweqonga. Ngasekupheleni kuka-2021 siye saphinda sayibranda saza sahlaziya itekhnoloji esikholelwa ukuba iyafuneka ukuyila ukusebenzisana, okusebenzayo kunye nokubandakanya i-blockchain.
✅-Intengiso kawonke-wonke kwi-Binance Smart Chain (iPinkSale)
✅ -Ibhanki kunye neCryptowallet
🚀- Iphulo elikhulu leNtengiso (liyaqhuba)
⚡️- BanccCEX™️ (Utshintshiselwano olusembindini)
⚡️- I-Ethereum Virtual Compability
⚡️- Ukutshintsha kweCrosschain
⚡️- Isango lentlawulo
❇️ - Okuninzi okuzayo…
⚡️- Inkqubo yeNdawo-yeNtengiso
⚡️- Iqonga lokugqibela elinazo zonke iimveliso ezingasentla kwisicelo esinye
Sisizathu sokuba i-Crypto ibe yinto eqhelekileyo. Iimpazamo zeshishini lokuhlawula malunga nokuba yinkumbulo yexesha elidlulileyo. Lixesha lokuba i-crypto yenze le nto i-crypto yayilungiselelwe ukuyenza - ukusombulula iingxaki zehlabathi zokwenyani. Ngengqekembe yethu ye-BANCC ye-$ kunye nazo zonke iimpawu eziza nayo - sikholelwa ukuba silikamva loshishino lwentlawulo kwaye siyakumema kuhambo.
Umseki kunye neGosa eliPhezulu leTekhnoloji
Ungene kwindawo ye-crypto ukususela kwiminyaka eyi-13 kwaye wadala kwiminyaka eyi-14 ubudala ishishini lakhe lokuqala noBenjamin, ukwakha iiwebhusayithi kunye neeapps. Unolwazi oluninzi lwezobugcisa kunye nolubalulekileyo kuphuhliso lwe-blockchain, uqoqosho kunye neziseko zokwakhiwa kweteknoloji ephezulu. Uyinxalenye ebalulekileyo yokwakha impumelelo yeBancc.
UBenjamin okwangoku ungumdlali oqeqeshiweyo kunye nomtyalomali kwipropathi, isitokhwe kunye ne-crypto. UBenjamin liqabane elincinane kwikhasino ye-crypto ye-intanethi. UBenjamin waqala inkampani yakhe yokuqala xa wayeneminyaka eyi-15 ubudala kunye noNils-Julius kwaye uneliso elihle lokubona amathuba apho abanye bangenako ukuwabona.
U-Isak ube ngumtyali-mali wepropathi ophumeleleyo ukusukela kwiminyaka eyi-18 kwaye ngoku uyi-CEO yenkampani enempumelelo yokuchwela. UIsak unesakhono esihle sokugxeka izinto aze abone izinto ngenye indlela. Ngamava amakhulu ezoqoqosho kunye nokucinga okunzulu u-Isak uyazi ukuba yintoni efunekayo ukuqhuba ishishini eliyimpumelelo.
U-Oskar ngumvelisi oza kugqitywa kungekudala. U-Oskar uneliso elibalaseleyo lokudala kunye nokuyila iiwebhusayithi, usetyenziso kunye nayo yonke into eza nenkqubo yokwenza oko. U-Oskar uya kuba yinkxaso ebalaseleyo yokudala kunye nokukhokela inkqubo yoyilo lweqonga leBancc.
U-Mirian uyongezwa kakhulu kwiqela, kunye nezakhono ezibalulekileyo kunye nengqiqo yokuthengisa. U-Mirian uya kuseka, aphuhlise kwaye anakekele ukuthengiswa kwe-Bancc. UMirian uthetha isiNgesi kunye neSpanish ngokutyibilikayo kunye nobuchule bakhe bokuthetha iilwimi ezimbini iBancc inokufikelela nangakumbi kubasebenzisi ngenkxaso, umxholo kunye nemidiya yoluntu.
I-TC-Crypto inamava amade kunye nokugcinwa kweNethiwekhi kunye nokusekwa kwishishini le-telecom. I-TC-Crypto ibinathi ngokwenyani ukusukela kusuku lokuqala kwaye ibinomdla kwaye inomdla kakhulu ngale projekthi. Sibona amandla amakhulu ngolwazi lwakhe kunye nezakhono ze-hardware / software inxalenye ye-blockchain.
U-Nick unomdla omkhulu we-crypto kunye ne-Bancc. Ngolwazi lwakhe lwangaphambili kwintengiso kunye nentsebenziswano. U-Nick uya kugxininisa ekusasazeni ulwazi lweprojekthi ngolungelelwaniso lwentengiso kunye nokufumana amathuba okubambisene kakhulu.
URaza ngumbhali wenqaku ogqwesileyo kwaye uthanda i-cryptocurrency kakhulu kangangokuba waqala ukubhala ngayo. Ngokusekelwe ePakistan, uRaza uya kuba ngumbhali wokuqala okhokelayo weBancc, ehlaziya uluntu kunye nemidiya yoluntu malunga nezinto ezizayo ezinomdla!
Qinisekisa ukujoyina kunye nokuthatha inxaxheba kwiiseshoni zeveki ze-AMA!
Ingakhuphisana njani iBancc™️ neCrypto.com, Binance njl.
Ingcinga engundoqo emva kwenkampani nganye ephumeleleyo igxile kwinzuzo ngokuqinisekileyo. Owona mahluko mkhulu phakathi kwe-Bancc™️ kunye nezi nkampani kukuba ezi nkampani zifuna ukuvelisa umvuzo ophezulu kangangoko kubaninizabelo bazo kwaye abaqinisekisi babo babonwa njengamahlakani kwisicwangciso senkampani kunye nemodeli yengeniso. I-Bancc izisa uhlobo olufanayo lwemodeli yengeniso kodwa kwiliso "loluntu". Ukunciphisa ingeniso epheleleyo yeBancc kunye nokuyandisa kubathathi-nxaxheba kwi-blockchain.
Ingayenza njani iBancc™️ zonke ezi zinto?
Itekhnoloji yinxalenye enomdla yokuziphendukela kwemvelo kwaye njengoko sibonile ngeBitcoin, ngakumbi kule minyaka ilishumi idlulileyo. Izinto ziqala ukuvela ngesantya esikhulu kunangaphambili. I-Bancc yasekwa kwinkolelo yokuba itekhnoloji kufuneka ifumaneke kuye wonke umntu kwaye ukwenza kube nzima kubasebenzisi ukusebenzisana nayo ayisiyiyo indlela esikholelwa ukuba ilungile. Ngokuqhagamshela ubugcisa obukhoyo obunembali yangaphambili ebonisa uzinzo kunye negumbi lokukhula i-Bancc™️, iya kuba nako ukuvala umsantsa phakathi kwezixhobo zebhanki eziqhelekileyo kunye nomoya we-cryptocurrency.
Kutheni iBancc ifuneka?
Umhlaba uyatshintsha kwaye i-cryptocurrency ilapha ukuhlala. Inye nje into, imirhumo. Ukuba ujonge kuyo kubasebenzisi ngokubanzi ukuba umzekelo usebenzisa iinkonzo zokuthunyelwa kwemali. Iintlawulo ziyafana. Akukho mntu ufuna ukusebenzela simahla kodwa ukubiza imali ephezulu kuwonakalisa ukukhula okunokwenzeka kwenethiwekhi. Ukuthumela i-10 $ yexabiso akufanele kubize i-60 $ ngexesha lokuqala. Uluntu ngokubanzi luza kufuna into enexabiso eliphantsi nekulula ukuyisebenzisa kuneenkonzo ezikhoyo namhlanje. I-Bancc™️ isombulula le ngxaki ngendlela yokwabela amagunya ngokudala uqoqosho olunempilo noluzinzileyo olungathembeli kwindawo enye, kodwa kubasebenzisi bebonke kuthungelwano.
Bhalisela kwincwadana namhlanje.
Qinisekisa ukuba uhlala uhlaziyiwe kwizinto eziqhubekayo e-Bancc, yiba khona okanye ibe isikwere.
Ngokubhalisa, uyavumelana nowethu Imigaqo kunye neeNkonzo.
Ilungelo lokushicilela © 2022 Bancc™️ | Ixhaswe ngu Bancc™️⚡️
Ulwazi lwekhontrakthi ehlakaniphile
Itikiti – sBanc
Umrhumo wokuLiquidity - 1%
Umrhumo wokuBuyBack – 0% (Ukutshiswa ngesandla)
Umrhumo wokuJonga - 7%
Umrhumo wokuThengisa - 3%
IMALI EWONKE - 11%